फेरि अनसन बस्दै डा. केसी – www.agnijwala.com
फेरि अनसन बस्दै डा. केसी
काठमाडौं ,२४ पुस – आफ्नै अनसनका क्रममा बर्खास्त भएका डीनलाई अदालतले पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि डा. गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्ने भएका छन् ।
उनले केहीबेरमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् ।
निकटवर्तीहरुका अनुसार डा.केसीले १४ औं अनसन सुरु भएको घोषणा गर्नेछन् । डा. केसीको दशौं अनसनका क्रममा बर्खास्त भएका डीन शशी शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले ४ दिनका लागि पुनर्वहाली गर्न आदेश दिए लगत्तै त्रिवि पदाधिकारीले पुनर्वहालीको प्रबन्ध मिलाउन आईओएमलाई भनेको छ ।
केसीको माग अनुसार अग्रवाल डिन बनेका थिए । स्रोतका अनुसार शर्मा फर्किएसँगै सर्च कमिटी बनाएर नयाँ डिन नियुक्ति गर्ने डा. केसीको आशंका छ । डा. शर्मा फर्किए पनि हालका डिन जेपी अग्रवालबारे भने त्रिविले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मेडिकल माफियाको स्वार्थ र साँठगाँठ अनुसार न्यायालयकै मानमर्दन हुने गरी फैसला भएको केसीले बताएका छन् । शर्मालाई पुनर्वहाली गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायधीश र तिनले स्थापित गरेका माफियाहरुविरुद्ध लड्नुको अब विकल्प छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।
смс шлюзggoogleсколько идет посылка из китая в украинуlocatedтеги noindex и nofollowзапрос в поисковой строке